Jean-Michel Cousteau Resort, Fiji Ugbu a na-anabata ndị ọbịa azụ, na-emepe ụwa ọzọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Fiji » Jean-Michel Cousteau Resort, Fiji Ugbu a na-anabata ndị ọbịa azụ, na-emepe ụwa ọzọ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Fiji • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Iwughachi • Resorts • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Jean-Michel Cousteau ezumike
Jean-Michel Cousteau Resort, Fiji, ebe nlegharị anya gburugburu ebe obibi na South Pacific, adịla njikere ịnabata ndị ọbịa mbụ ya mgbe ọnwa ole na ole mechiri ndị njem mba ụwa, n'ihi ọrịa na-efe efe. Jean-Michel Cousteau Resort bụ ebe dịpụrụ adịpụ nke nwere oke ahịhịa na agwaetiti Vanua Levu na-ele mmiri dị jụụ nke Savusavu Bay, Jean-Michel Cousteau Resort bụ ụzọ mgbapụ pụrụ iche maka ndị di na nwunye, ezinụlọ na ndị njem nwere nghọta na-achọ izu ike, njem, na ịkwụ ụgwọ okomoko mgbe ọnwa ole na ole nọrọ n'ụlọ.
Fiji na -atụ anya ịmaliteghachi ndị njem mba ofesi (gụnyere ndị njem si USA) site na mbido Nọvemba.
Ebe ntụrụndụ okomoko na agwaetiti Vanua Levu nke dị na South Pacific na-enye ihe ngosi na ahụmịhe pụrụ iche.
A na-agba ndị ọrụ ebe a ọgwụ mgbochi ọrịa nke ọma, zụọ azụ, ma gbaa mbọ gafere ọkwa kachasị elu nke ụkpụrụ nchekwa na ịdị ọcha COVID-19.
Mmeghe a na -atụ anya na -esochi akụkọ Fiji na -atụ anya ịmaliteghachi ndị njem mba ụwa (gụnyere ndị njem si USA) site na mbido Nọvemba na Qantas ga -amalite ọrụ site na Australia na Disemba. Ndị ọbịa a na-atụ anya na US nwere ike ide akwụkwọ ndoputa site na ịkpọ (800) 246-3454 ma ọ bụ zitere email [email protected], na ndị ọbịa si Australia nwere ike ịde akwụkwọ site na ịkpọ (1300) 306-171 ma ọ bụ site na email [email protected].
Bartholomew Simpson, onye isi njikwa nke Jean-Michel Cousteau Resort, Fiji. “Anyị enweghị ike ichere ịhụ ọńụ dị n'ihu ha wee nụ ọchị ahụ ka ha na -eleta agwaetiti anyị ọzọ ịnụ ụtọ na inyocha ọmarịcha ihe okike dị ịtụnanya nke ebe ndịda South Pacific anyị. N'ime oge a na -enwetụbeghị ụdị ya n'akụkọ ihe mere eme anyị, ndị ọrụ ebe anyị na -arụ ọrụ rụsiri ọrụ ike iji chekwaa ịma mma nke ihe ahụ ka ha na -echekwa nkwa anyị na gburugburu. Anyị dị njikere inye ndị ọbịa anyị ezumike pụrụ iche na -agaghị echefu echefu. ”
Ndị ọbịa na-alọta na ndị na-achọ njem ọhụrụ ga-enwe ohere ịrahụ ụra na ezigbo Fijian, mikpuo n'ime ụfọdụ mmiri kachasị mma n'ụwa, na-eku ume nke ọma wee nyochaa mpaghara site na kayak n'oké osimiri, ma ọ bụ gbaga n'àgwàetiti nkeonwe maka ezumike. . Ndị ọbịa nwekwara ike ịga na mangroves, ugbo pearl, ezigbo obodo Fijian, ma ọ bụ jiri ụkwụ gafere n'oké ọhịa ebe okpomọkụ wee chọpụta nsụda mmiri zoro ezo.
Ndị ọbịa kacha nta ga-enwe nleta na Bula Club, klọb ụmụaka na-enweta ihe nrite, ebe ha ga-eji ụbọchị ha nyocha na ịmụ banyere ụwa gbara ha gburugburu site na egwuregwu na ihe omume dị n'èzí. A na -ekenye ụmụaka dị afọ 5 gbadara nana nwa nke ha maka oge ọnụnọ ha; na ụmụaka gbara afọ 6 ruo 12 na -esonye n'òtù dị nta nke otu enyi na -edu.
The Jean-Michel Cousteau ezumike A na-enye ndị ọrụ ọgwụ mgbochi ọrịa zuru oke, zụọ azụ ma gbaa mbọ ka ha gafere ọkwa kachasị elu nke ụkpụrụ nchekwa na ịdị ọcha COVID-19 mgbe ha na-enye ndị ahịa ọrụ na-anabata ndị ahịa. Ndị ọrụ ga -eji mkpuchi ihu kelee ndị ọbịa, yana n'ọnọdụ ụfọdụ, mgbe ha na -ahụ na ịdịpụrụ adịpụ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Tụkwasị na nke a, a ga -asachapụ ebe niile aka dị elu ma mee ka ọ dị ọcha ugboro ugboro.
Tụkwasị na nke a, Njem Nleta Fiji mepụtara “Nlekọta Fiji Nlekọta, ”Mmemme na-egosipụta nkwalite nchekwa, ahụike na ịdị ọcha maka ụwa mgbe oria ojoo gasịrị ka mba ahụ na-akwado ịmalitegharị ndị njem. Ihe mmemme a, nke e mere iji nyere aka belata mgbasa nke COVID-19, anabatala ihe karịrị 200 nke ebe ntụrụndụ agwaetiti, ndị na-ahụ maka njem, ụlọ nri, ebe nkiri na ihe ndị ọzọ.
Ndị ọbịa nwere ike jiri “udo nke uche” were akwụkwọ maka ebe a na -enye ndị mmadụ ohere mgbanwe na ịdị mma maka ndoputa ọhụụ. Ebe a na-eme njem emebela “Oge nkwụnye ego” ruo ụbọchị iri atọ mgbe oke mepere n'etiti Fiji na obodo gị, enwere ike ịchọta nkọwa zuru oke. Ebe a.
Maka ndoputa na ozi ndị ọzọ na Jean-Michel Cousteau Resort, biko gaa fijiresort.com.
Banyere Jean-Michel Cousteau Resort
Ihe nrite mmeri Jean-Michel Cousteau Resort bụ otu n'ime ebe ezumike ama ama na South Pacific. N'ịbụ nke dị n'agwaetiti Vanua Levu ma wuo ya na hekta 17, ebe okomoko na -eleghara mmiri udo nke Savusavu Bay anya ma na -enye ụzọ mgbapụ pụrụ iche maka ndị di na nwunye, ezinụlọ na ndị njem nwere nghọta na -achọ njem njem yana ezigbo okomoko na ọdịbendị obodo. Jean-Michel Cousteau Resort na-enye ahụmịhe ezumike na-agaghị echefu echefu nke sitere na ịma mma eke agwaetiti ahụ, nlebara anya onwe ya, yana ọmarịcha ndị ọrụ. Ebe a na-ahụ maka gburugburu ebe obibi na mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-enye ndị ọbịa ọtụtụ ihe eji enyere ndụ aka, gụnyere burek ụlọ nke a haziri nke ọma, nri ụwa niile, usoro ntụrụndụ pụrụ iche, ahụmịhe gburugburu ebe obibi na-enweghị atụ, yana ọtụtụ usoro ọgwụgwọ spa sitere n'ike mmụọ nsọ Fijian. fijiresort.com
Banyere Canyon Equity LLC
E hiwere otu ụlọ ọrụ Canyon, nke nwere ebe a na-eme njem, nke hiwere isi na Larkspur, California, na Mee 2005. Mantra ya bụ iji nweta ma zụlite obere ogige ntụrụndụ ama ama dị oke egwu na ebe pụrụ iche yana obere ihe eji eme ụlọ na-ekepụta echiche dị oke mma. nke obodo n'obodo ọ bụla. Kemgbe e hibere ya na 2005 Canyon emepụtala ọmarịcha ebe ntụrụndụ, na ọnọdụ sitere na mmiri turquoise nke Fiji, ruo ọnụ ọnụ ugwu nke Yellowstone, ruo ógbè ndị omenkà nke Santa Fe, na Canyons nke ndịda Utah.
Pọtụfoliyo nke Canyon Group nwere ụdị akara ngosi dịka Amangiri (Utah), Amangani (Jackson, Wyoming), Four Seasons Resort Rancho Encantado (Santa Fe, New Mexico), Jean-Michel Cousteau Resort (Fiji), na Dunton Hot Springs, (Dunton) , Colorado). A na-amalitekwa ụfọdụ ihe ọhụrụ dị egwu na mpaghara dịka Papagayo Peninsula, Costa Rica, na Hacienda dị afọ 400 na Mexico, ha niile ga-ekwupụta nnukwu okwu n'ahịa mara mma nke njem mba ofesi dị oke ọnụ ahịa ka a na-ebido nke ọ bụla. . canyonequity.com